Ufuna ubulungiswa owase-Edendale | News24
Ufuna ubulungiswa owase-Edendale
ISITHOMBE: facebookUMnu Syabonga Maduna owagwazwa wabulawa edolobheni eMgungundlovu.
UMNDENI wowesilisa wase-Edendale owagwazwa wabulawa edolobheni laseMgungundlovu uthi awukakazukuthola ukuphumula kuze kube babona umenzi wobubi ebhadla ejele.
UMnu Syabonga Maduna (26) wagwazwa wabulawa ngasesitolo u-Shoprite emgwaqeni u-Church Street edolobheni laseMgungundlovu ngenyanga kaMasingana (January) kulonyaka. Ngokusho kwelunga lo mndeni wakhe uNks Nomusa Mbanjwa nothe uSyabonga wayenza unyaka wakhe wokugcina ezifundweni ze-Financial management esikhungweni semfundo ephakeme i-Durban University of Techonolovgy.
Elandisa i-Echo uthe ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko uSyabonga wayehleli nabangane bakhe ngaphambi kwase-Shoprite nalapho ayekade edayisa khona ukuthola imadlana yokuthenga izinto zakhe eziseceleni njengoba kade efundiswa isikhwama esibhekelele abafundi i-National Student Financial Aid System (Nsfas).
Uthe : “Umfowethu wabulawa kabuhlungu kodwa futhi siwumndeni asibutholi ubulungiswa. Uyaziwa umuntu owambulala kanti futhi kukhona ngisho nabofakazi ababekhona bebuka ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko kodwa umenzi wobubi usaqhubeka nempilo yakhe yena engathi akwenzekanga lutho thina sibe silahlekelwe. Amaphoyisa amubopha umsolwa kodwa akaqedanga ngisho isonto ehleli ejele wadedelwa ngebheyili yemali engu-R1500 ekubeni lo muntu ekhiphe isidumbu.
“Okusiphatha kabi kakhulu ukuthi njengomndeni besesithembele ekutheni umthetho uzosilwela ubophe uphinde ugwebe umenzi wobubi ukuze nathi sizokwazi ukuthi mhlawumbe sithobeke amanxeba kodwa lokho akwenzekanga.
Umthetho uvele wamudedela wathi akahambe ayohlala ngaphandle engathi ayikho into embi ayenzile. Lo muntu wahamba wayothenga umbese ngesikhathi exabana noSyabonga nokukhomba ngokusobala ukuthi vele wayehlosile ukumbulala. Yini kanti lena engaka ekumele ize yenzeke ukuze umthetho ulwele abantu abahlukumezekile?,” kusho yena.
Uqhube wathi bengumndeni kunzima kakhulu njengoba uSyabonga kade sekunguyena umuntu obebhekiwe ukuthi uzoshintsha isimo sasekhaya kwazise bekuzoba nguyena owokuqala ukuthi aphothule izifundo zakhe enyuvesi.
“Ubeseyithemba lasekhaya wonke umuntu ubebheke yena ukuthi aphothule izifundo zakhe ashintshe isimo sasekhaya kodwa loko akwenzekanga. Ubengumfana ozilungele ozaziyo ukuthi ufunani empilweni.
“Asisazi ukuthi kumele senze njani ngoba nomphenyi wecala naye akasaphumeli obala ukuthi yini ebambe ukuba kuqhutshekwe nokuqulwa kwecala. Njalo uma siya enkantolo kuvele kuthiwe icala lihlehlile singazi kodwa ukuthi lihlehleleni ngoba umphenyi wecala wasitshela ukuthi bonke ubufakazi sebuqoqiwe nophenyo seluphothuliwe. Into esiyifunayo nje thina ubulungiswa bengane yasekhaya.”
Uthe lesi sigameko sabashiya nesikhulu isilonda kangangokuba abasafuni ngisho kwakusondela eduze kwalapho senzeka khona ngoba kuvele kuvuke emanxeba.